May 10, 2019 - CeleLove
အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းစေဖို့(မိန်းကလေးများသာဖတ်ရန်)
May 10, 2019 Cele Love 0
အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းစေဖို့(မိန်းကလေးများသာဖတ်ရန်) ဘ၀လက်တွဲဖော်လည်းလိုချင်တယ်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ လည်း စိတ်ကူးရှိတယ်လက်ရှိချစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေး လည်းအဆင်ပြေပါ့မလား စိတ်ပူနေတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိမရှိRalph Smart က စိတ်ပညာရှုထောင့်မှ သုံးသပ်ပြထားသည်ကို မှီငြမ်းဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ် နော် …။ (၁) […]
၁၅ မိနစ် အတွင်း ခြေထောက်နဲ့ လက်တွေကို ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေး
၁၅ မိနစ် အတွင်း ခြေထောက်နဲ့ လက်တွေကို ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေး ၁၅ မိနစ် အတွင်း ဆိုတော့ မှတ်သား ထားသင့် ပါတယ်။ သင့်ခြေထောက် လက် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က ညိုတဲ့ နေရာတွေ ဆဲသေတွေကို ဒီဖော်မြူလာနဲ့ အလွယ် တကူ ဖယ်ရှားနိုင် […]
ညဘက် အိမ်သာထတက်တဲ့ ၁၅ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး မုဒိန်းကျင့်ခံရ ထီးချိုင့်မြို့နယ်မှာ ဖြစ်ပြန်ဘီဗျာ ထီးချိုင့် မေ ၁၀ ၂၀၁၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ် ——-ကျေးရွာတွင် အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး ညပိုင်းအချိန်အိမ်သာသွားစဉ် အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးမှအလို မတူဘဲသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူထား […]
ညီမဖြစ်သူကို ဦးလေးအရင်းမှ သားမယားကျင့်နေပုံကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အစ်မ ပြောပြချက် ( ရုပ်သံ ) ညီမဖြစ်သူကို ဦးလေးအရင်းမှ သားမယားကျင့်နေပုံကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အစ်မ ပြောပြချက် ( ရုပ်သံ ) အရ မုဒိန်းပြုကျင့်မှုပေါ်ပေါက် ဦးလေးအရင်းဖြစ်သူက ၅ နှစ်အရွယ် တူမအရင်းဖြစ်သူကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု […]
ဘုရား ဘုရား …အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မေလ ၁၈ မှ ၂၃ ရက်အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင် :'( …အများသိအောင်ရှယ်ပေးကြပါ )
ဘုရား ဘုရား …အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မေလ ၁၈ မှ ၂၃ ရက်အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင် :'( …အများသိအောင်ရှယ်ပေးကြပါ ) အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မေလ ၁၈ ရက်မှ ၂၃ ရက်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက […]
ချိုင်းမွေးတွေကို ရိတ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း ကျွတ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ချိုင်းမွေးတွေကို ရိတ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း ကျွတ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ နွေရာသီက ဂါဝန်လက်ပြတ် ၊ အင်္ကျီလက်ပြတ် ၊ ဘောင်းဘီတို ၊ ဘီကီနီ တို့ဝတ်ရမယ့် အချိန်ပါ။ ဒီအ၀တ်အစားတွေ လှပေမယ့် ချိုင်း နဲ့ ခြေသလုံးရှိ အမွှေးတွေ ရှင်းနေမှ ကြည့်လို့လှပါတယ်။ အမွှေးရိတ်တယ်ဆိုတာ အသားအရေကို […]
သမီး အကြီးဆုံးကို ဖခင်ဖြစ်သူကအကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်
သမီး အကြီးဆုံးကို ဖခင်ဖြစ်သူကအကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့် အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိသမီးကြီးကို ဖခင်ဖြစ်သူကအကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် …။ ဖြစ်စဉ်မှာ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ အင်ဒေါင်းကျေးရွာ၌နေထိုင်သည့် အသက် ၅၄ နှစ်ရှိဖခင်ဦးအောင်ထွန်းသည် ၎င်း၏သမီးကြီးကို အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် အရေးယူပေးပါရန် […]
သဘာဝအတိုင်း အရပ်ရှည်အောင် လုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများနဲ့ရှောင်ရန်အချက်များ
သဘာဝအတိုင်း အရပ်ရှည်အောင် လုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများနဲ့ရှောင်ရန်အချက်များ (၁) အာဟာရ မျှတတဲ့ အစားအသောက်ကို စားပေးပါ လူတစ်ယောက်ဟာ ဝတဲ့ ခနာကိုယ် ရှိမယ်ဆိုရင် ကြည့်ရတာ အရပ်ပုသလို ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ စားသောက်ပုံကလည်း သင်အရပ်ရှည်ပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပါတယ်နော် …. ။ […]
အမျိုးသားထုကြီး အသည်းအသန် ဝန်းရံနေကြတဲ့ ပြည်တွင်းအမျိုးသမီး ဆယ်လီတွေ
အမျိုးသားထုကြီး အသည်းအသန် ဝန်းရံနေကြတဲ့ ပြည်တွင်းအမျိုးသမီး ဆယ်လီတွေ အမျိုးသားပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ အမျိုးသမီးဆယ်လီတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးနာမည်ကြီးအနုပညာ ရှင်တွေအများကြီးထဲကမှအမျိုးသားထုကြီးရဲ့သဲသဲလှုပ်ဝန်းရံအားပေးမှုကိုရထားတဲ့ဆယ်လီမမတွေ၊ညီမလေးတွေရှိပါတယ်။အမျိုးသားမှန်င်ဒီဆယ်လီအမျိုးသမီးတွေထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုတော့သေချာပေါက်ဝန်းရံတယ်လို့တောင်သေချာပေါက် ပြောလို့ရပါတယ်။အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ထဲက ဆယ်လီ မမနဲ့ ညီမလေး တွေ ကတော့ ……. #လုလုအောင် သူကတော့မော်ဒယ်ချောချောလေးလုလုအောင်ပါ။အမျိုးသားထုကြီးကတော့သူမကို“ခေးကြီးလု..”ဆိုပြီးချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြပါတယ်။လုလုအောင် ပုံတစ်ပုံတင်ရင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သူမရဲ့ Post အောက်မှာ အားပေး […]
ငါးရက် အတွင်း ပွေး ညှင်း တင်းတိတ် ဝက်ခြံ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံ ဖု မပေါက်ဖူးတဲ့သူမရှိပါဘူး ပေါက်ဖူးတဲ့ သူတွေပါပဲ။ စိုးရိမ်စရာ ရောဂါ အနာ မဟုတ်ပေမယ့် မျက်နာ ပေါ်မှာ အပေါက် များတဲ့ ရောဂါ တွေဖြစ်လို့ […]